Ogaden News Agency (ONA) – Xuduuda Itoobiya & Eritrea oo Ciidamadii Laga Kala Qaaday.
Xuduuda Itoobiya & Eritrea oo Ciidamadii Laga Kala Qaaday.
Wararka naga soo gaadhaya xuduuda wadamada Itoobiya iyo Eritrea ayaa sheegaya saansaan nabadeed oo halkaas kamuuqata kadib markii lakala qaaday ciidamadii mudada dheer halkaas isku horfadhiyay.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa maalin nimadii shalay oo Talaado ahayd lakala qaaday ciidamadii labada dal ee mudada dheer xuduuda labada wadan isku horfadhiyay kuwaas oo uu dhex maray dagaal khadhaadh oo khasaare aad ubadan keenay.
Kala qaadka ciidamada ayaa lagu soo aaday sanadka cusub ee tirsiga Itoobiya oo shalay Kow ahaa, waxaana la arkayay labada ciidan oo aad ufaraxsan oo intay isu gudbeen shafka isku salaamaya isla markaana muujinaya kalsooni aad ubadan.
Dhanka kale dadka deegaanka ayaa aad usoo dhaweeyay in ay dhamaanto colaadii halkaas kajirtay mudada dheer oo gaar ahaan iyaga ku ahayd qodax kutaagan, waxayna shacabku bilaabeen mar horaba in ay isu gudbaan.
Dadka shacabka ah ee labada dhinac ayaa ah dad isku dhaqan, af iyo dhalasho ah, mana kala maarmaan, waxayna muteen dhibaato aad ubadan intii ay colaadu socotay.
Raysal-wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiye Axmed ayaa saxada lasoo galay furfurnaansho siyaasadeed oo aad ubadan, wuxuuna saamayn kuyeeshay colaadihii geeska Africa, sida Itoobiya iyo Eritrea oo calaad gaamurtay ay kadhaxaysay iyo Eritrea iyo Jabuuti oo sidoo kale ay colaad kadhaxaysay.